အချစ်၏ အမှောင်ဘက်ခြမ်း (အပိုင်း – ၈) – For her myanmar
Posted on May 6, 2019 Author Wathun	Comment(0)
ကားပေါ်က ဆင်းလာသောခပ်ဖြောင့်ဖြောင့်လူက ဇွဲသစ်ကို မျက်မှောင်ကြုတ်ကာ တစ်ချက်ကြည့်လိုက်သည်။
ယမုံသည် ည ၉ နာရီထိုးခါနီးအထိပြန်မရောက်နိုင်သော ဟန်နီ့ကိုမျှော်ရင်း လည်ပင်းပင် ရှည်လာတော့မည် ထင်ရသည်။ အိမ်တွင်းမှ မျှော်နေရင်း နေမထိ ထိုင်မသာ ဖြစ်လာသောကြောင့် လမ်းမဘက် ထွက်ရင်း ဧက ကားဝင်လာမည့်ဘက်သို့ လည်ဆန့်ရင်း မျှော်နေမိသည်။ ဟန်နီက မာမီကို night scene ရှိသည်ဟု ဆိုပြီး သွားခြင်းဖြစ်သည်မို့ ဟန်နီသာပြန်ရောက်မလာလျှင် ယမုံပါ ဒုက္ခရောက်နိုင်သည်။ ဖုန်းဆက်ကြည့်ဖို့လည်း အားနာနေသောကြောင့် ဖုန်းကို ဖွင့်ကြည့်လိုက် ပြန်ပိတ်လိုက် လမ်းထိပ်ဘက်ကိုမျှော်လိုက်နှင့်ပဲ ယမုံတစ်ယောက် အလုပ်များရတော့သည်လေ..
အနားမှာကပ်ပြီး ထွက်လာသောအသံကြောင့် ယမုံကဆတ်ကနဲတုန်သွားပြီး လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ ဇွဲသစ်ဖြစ်နေသည်။
“သြော် ဒေါက်တာ လန့်လိုက်တာ”
“ဒီအချိန်ကြီး လမ်းမှာ ဘာထွက်လုပ်နေတာလဲ”
“ဟန်နီနဲ့ ယမုံက အတူတူနေတာလား ဆေးခန်းက မှတ်တမ်းမှာကျတော့..”
“မဟုတ်ပါဘူး ဒီနေ့ဟန်နီက ကိစ္စလေးတစ်ခုရှိလို့ အပြင်သွားတာ အပြန်ဝင်လာမှာမို့လို့”
“ဒါနဲ့ ဒေါက်တာကရော ဘယ်ကပြန်လာတာလဲ”
“ရုတ်တရက်ဗိုက်ဆာလာတာနဲ့ လမ်းထိပ်မှာ စားစရာထွက်ဝယ်တာပါ.. ဒါဖြင့် သွားမယ်နော် မယမုံ အိမ်ထဲကဝင်စောင့်ပါလား အပြင်မှာကျတော့ မှောင်နေပြီလေ မသင့်တော်ဘူး”
Related Article >>> အချစ်၏ အမှောင်ဘက်ခြမ်း (အပိုင်း -၇)
ဇွဲသစ်က ယမုံကိုနှုတ်ဆက်ပြီး ထွက်သွားပြီးတော့မှ ပြန်လှည့်လာပြီး…
“ဟိုလေ.. စပ်စုတယ်လို့လည်းမထင်စေချင်ဘူး ဆရာလုပ်တယ်လို့လည်း မထင်စေချင်ပါဘူး သိချင်တာလေး တစ်ခုတော့ရှိတယ်”
“မမေ အဆင်ပြေရဲ့လားလို့.. ပြီးတော့ မမေကို ဂရုစိုက်ပေးစေချင်တယ် မယမုံ”
ဒေါက်တာဇွဲသစ်ရဲ့စကားကိုကြားတော့ ယမုံက တစ်ချက်ပြုံးလိုက်ရင်း…
“ဟန်နီ့ကို ကျွန်မဂရုစိုက်လာတာကြာပါပြီရှင် တကူးတကကြီး မှာစရာမလိုပါဘူး ပြီးတော့ ဟန်နီလည်း အဆင်ပြေပါတယ်”
ယမုံပြန်ပြောတော့ ဇွဲသစ်က ရှက်သွားသလိုမျိုး ဆံပင်များကိုလက်နှင့် ဖွကုတ်လိုက်ရင်း…
“ကျွန်တော်က မိတ်ဆွေတစ်ယောက်လို ကျွန်တော့် patient တစ်ယောက်လို စိတ်ပူသလိုမျိုး ပြောတာပါ”
“စိတ်ပူမနေပါနဲ့ ဒေါက်တာ့ patient ဟိုမှာပြန်လာပြီ”
ဇွဲသစ်နှင့်ယမုံ ရပ်နေသည့်နားသို့ ကားတစ်စီးလာရပ်ပြီး ကားပေါ်မှ ဟန်နီဆင်းလာသည်။ ဂါဝန် စကပ် ဘောင်းဘီ စသည့်ခေတ်ဆန်သည့် အဝတ်များနှင့်သာ တွေ့ရလေ့ရှိသော ဟန်နီ့ကို မြန်မာဝတ်စုံလေးနှင့် တွေ့လိုက်ရတော့ ဇွဲသစ် သတိလက်လွတ်ငေးကြည့်နေမိသည်။ ကားတံခါးပိတ်သံကြားပြီး လူတစ်ယောက်ထပ်ဆင်းလာတာကိုသတိထားမိမှ ဇွဲသစ် စိတ်နှင့်ကိုယ်ပြန်ကပ်တော့သည်။ ကားပေါ်က ဆင်းလာသောခပ်ဖြောင့်ဖြောင့်လူက ဇွဲသစ်ကို မျက်မှောင်ကြုတ်ကာ တစ်ချက်ကြည့်လိုက်သည်။ ပြီးတော့မှ…
Related Article >>> အချစ်၏ အမှောင်ဘက်ခြမ်း (အပိုင်း -၆)
“ယမုံ.. ကျွန်တော် ယမုံ့သူငယ်ချင်းကို အချိန်မီပြန်ပို့ပေးတယ်နော်”
“အမလေး ကျေးဇူးတင်လိုက်တာရှင် ဒီမှာမျှော်ရတာ သစ်ကုလားအုတ်ဖြစ်တော့မယ်”
“ဆောရီးပါ အသွားနောက်ကျတော့ အပြန်ပါနောက်ကျသွားတာ ဒါတောင် ကျွန်တော်အမြန်မောင်းလာခဲ့တာ ဟန်နီ့ကိုသာမေးကြည့်ပါ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ယမုံ့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်”
“ဟုတ်တယ် ယမုံရဲ့ ကိုက နင်မျှော်နေမှာစိုးလို့ကားကို အမြန်မောင်းလာတာ… ငါ့သူငယ်ချင်းလေး မျှော်ရတာ မောသွားပြီလား နောက်နေ့မုန့်ဝယ်ကျွေးရမယ်”
“မုန့်ဝယ်ကျွေးမယ်ဆို ငါတစ်ယောက်တည်းနဲ့မရဘူး။ နင် ဒေါက်တာ့ကိုပါကျွေးရမှာ… ဒေါက်တာက နင် နေကောင်းလား စိတ်ပူနေတာ”
ယမုံပြောတော့မှ ဟန်နီက ဇွဲသစ်ကို သတိထားမိဟန်ဖြင့်ကြည့်လိုက်ပြီး…
“ဟန်နီနေကောင်းပါတယ်ဒေါက်တာ… ဟန်နီ့ကို စိတ်ပူပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်”
“ရပါတယ် မမေ… ဒါဆိုကျွန်တော်သွားဦးမယ်”
ဇွဲသစ်ပြန်သွားတော့ ဧက က..
“ဟုတ်တယ် ကို ဟန်နီပြနေကျဆရာဝန်ပါ”
“သြော်… အင်းပါ ကဲ ဟန်နီ ကိုယ်ပြန်တော့မယ်.. ဟန်နီလည်း ပြန်နားလိုက်တော့… ယမုံ ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်”
ဧက ကဟန်နီတို့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီး ပြန်သွားသည်။ ဟန်နီ့ကိုတော့ ယမုံကိုယ်တိုင် ကားဖြင့်ပြန်လိုက်ပို့ပေးသည်။ ယမုံ လိုက်ပို့ပေးသောကြောင့် မာမီကလည်း ဟန်နီအိမ်ပြန်နောက်ကျမှုကို သံသယမဝင်တော့။ ဟန်နီခြေလက်ဆေး အိပ်ယာဝင်ရန် ပြင်လိုက်ပြီး အိပ်ယာပေါ်လှဲချလိုက်စဉ် ဧကဆီမှ “I love you more than yesterday” ဆိုသော message လေးဝင်လာသည်။ ဟန်နီကလည်း me too လို့ reply ပြန်လိုက်ပြီး အိပ်စက်ရန် မျက်လုံးများမှိတ်လိုက်စဉ် ဧက၏ ကလေးများနှင့်ပျော်ပါးနေပုံများ နွေးထွေးကြင်နာတတ်သောအပြုအမူများကို ပြန်မြင်ယောင်မိကာ တစ်ယောက်တည်း ကြည်နူးစွာ ပြုံးလိုက်မိသည်။
သို့သော်.. တစ်ဖက်မှ ဧက၏ အခြေအနေကိုသာ ဟန်နီသိခဲ့လျှင် ထိုသို့ ပြုံးနိုင်ပါဦးမည်လား?
ကားပျေါက ဆငျးလာသောခပျဖွောငျ့ဖွောငျ့လူက ဇှဲသဈကို မကျြမှောငျကွုတျကာ တဈခကျြကွညျ့လိုကျသညျ။
ယမုံသညျ ည ၉ နာရီထိုးခါနီးအထိပွနျမရောကျနိုငျသော ဟနျနီ့ကိုမြှျောရငျး လညျပငျးပငျ ရှညျလာတော့မညျ ထငျရသညျ။ အိမျတှငျးမှ မြှျောနရေငျး နမေထိ ထိုငျမသာ ဖွဈလာသောကွောငျ့ လမျးမဘကျ ထှကျရငျး ဧက ကားဝငျလာမညျ့ဘကျသို့ လညျဆနျ့ရငျး မြှျောနမေိသညျ။ ဟနျနီက မာမီကို night scene ရှိသညျဟု ဆိုပွီး သှားခွငျးဖွဈသညျမို့ ဟနျနီသာပွနျရောကျမလာလြှငျ ယမုံပါ ဒုက်ခရောကျနိုငျသညျ။ ဖုနျးဆကျကွညျ့ဖို့လညျး အားနာနသေောကွောငျ့ ဖုနျးကို ဖှငျ့ကွညျ့လိုကျ ပွနျပိတျလိုကျ လမျးထိပျဘကျကိုမြှျောလိုကျနှငျ့ပဲ ယမုံတဈယောကျ အလုပျမြားရတော့သညျလေ..
အနားမှာကပျပွီး ထှကျလာသောအသံကွောငျ့ ယမုံကဆတျကနဲတုနျသှားပွီး လှညျ့ကွညျ့လိုကျတော့ ဇှဲသဈဖွဈနသေညျ။
“သွျော ဒေါကျတာ လနျ့လိုကျတာ”
“ဒီအခြိနျကွီး လမျးမှာ ဘာထှကျလုပျနတောလဲ”
“ဟနျနီနဲ့ ယမုံက အတူတူနတောလား ဆေးခနျးက မှတျတမျးမှာကတြော့..”
“မဟုတျပါဘူး ဒီနဟေ့နျနီက ကိစ်စလေးတဈခုရှိလို့ အပွငျသှားတာ အပွနျဝငျလာမှာမို့လို့”
“ဒါနဲ့ ဒေါကျတာကရော ဘယျကပွနျလာတာလဲ”
“ရုတျတရကျဗိုကျဆာလာတာနဲ့ လမျးထိပျမှာ စားစရာထှကျဝယျတာပါ.. ဒါဖွငျ့ သှားမယျနျော မယမုံ အိမျထဲကဝငျစောငျ့ပါလား အပွငျမှာကတြော့ မှောငျနပွေီလေ မသငျ့တျောဘူး”
Related Article >>> အခဈြ၏ အမှောငျဘကျခွမျး (အပိုငျး -၇)
ဇှဲသဈက ယမုံကိုနှုတျဆကျပွီး ထှကျသှားပွီးတော့မှ ပွနျလှညျ့လာပွီး…
“ဟိုလေ.. စပျစုတယျလို့လညျးမထငျစခေငျြဘူး ဆရာလုပျတယျလို့လညျး မထငျစခေငျြပါဘူး သိခငျြတာလေး တဈခုတော့ရှိတယျ”
“မမေ အဆငျပွရေဲ့လားလို့.. ပွီးတော့ မမကေို ဂရုစိုကျပေးစခေငျြတယျ မယမုံ”
ဒေါကျတာဇှဲသဈရဲ့စကားကိုကွားတော့ ယမုံက တဈခကျြပွုံးလိုကျရငျး…
“ဟနျနီ့ကို ကြှနျမဂရုစိုကျလာတာကွာပါပွီရှငျ တကူးတကကွီး မှာစရာမလိုပါဘူး ပွီးတော့ ဟနျနီလညျး အဆငျပွပေါတယျ”
ယမုံပွနျပွောတော့ ဇှဲသဈက ရှကျသှားသလိုမြိုး ဆံပငျမြားကိုလကျနှငျ့ ဖှကုတျလိုကျရငျး…
“ကြှနျတျောက မိတျဆှတေဈယောကျလို ကြှနျတေျာ့ patient တဈယောကျလို စိတျပူသလိုမြိုး ပွောတာပါ”
“စိတျပူမနပေါနဲ့ ဒေါကျတာ့ patient ဟိုမှာပွနျလာပွီ”
ဇှဲသဈနှငျ့ယမုံ ရပျနသေညျ့နားသို့ ကားတဈစီးလာရပျပွီး ကားပျေါမှ ဟနျနီဆငျးလာသညျ။ ဂါဝနျ စကပျ ဘောငျးဘီ စသညျ့ခတျေဆနျသညျ့ အဝတျမြားနှငျ့သာ တှရေ့လရှေိ့သော ဟနျနီ့ကို မွနျမာဝတျစုံလေးနှငျ့ တှလေို့ကျရတော့ ဇှဲသဈ သတိလကျလှတျငေးကွညျ့နမေိသညျ။ ကားတံခါးပိတျသံကွားပွီး လူတဈယောကျထပျဆငျးလာတာကိုသတိထားမိမှ ဇှဲသဈ စိတျနှငျ့ကိုယျပွနျကပျတော့သညျ။ ကားပျေါက ဆငျးလာသောခပျဖွောငျ့ဖွောငျ့လူက ဇှဲသဈကို မကျြမှောငျကွုတျကာ တဈခကျြကွညျ့လိုကျသညျ။ ပွီးတော့မှ…
Related Article >>> အခဈြ၏ အမှောငျဘကျခွမျး (အပိုငျး -၆)
“ယမုံ.. ကြှနျတျော ယမုံ့သူငယျခငျြးကို အခြိနျမီပွနျပို့ပေးတယျနျော”
“အမလေး ကြေးဇူးတငျလိုကျတာရှငျ ဒီမှာမြှျောရတာ သဈကုလားအုတျဖွဈတော့မယျ”
“ဆောရီးပါ အသှားနောကျကတြော့ အပွနျပါနောကျကသြှားတာ ဒါတောငျ ကြှနျတျောအမွနျမောငျးလာခဲ့တာ ဟနျနီ့ကိုသာမေးကွညျ့ပါ ဘာပဲဖွဈဖွဈ ယမုံ့ကိုကြေးဇူးတငျပါတယျ”
“ဟုတျတယျ ယမုံရဲ့ ကိုက နငျမြှျောနမှောစိုးလို့ကားကို အမွနျမောငျးလာတာ… ငါ့သူငယျခငျြးလေး မြှျောရတာ မောသှားပွီလား နောကျနမေု့နျ့ဝယျကြှေးရမယျ”
“မုနျ့ဝယျကြှေးမယျဆို ငါတဈယောကျတညျးနဲ့မရဘူး။ နငျ ဒေါကျတာ့ကိုပါကြှေးရမှာ… ဒေါကျတာက နငျ နကေောငျးလား စိတျပူနတော”
ယမုံပွောတော့မှ ဟနျနီက ဇှဲသဈကို သတိထားမိဟနျဖွငျ့ကွညျ့လိုကျပွီး…
“ဟနျနီနကေောငျးပါတယျဒေါကျတာ… ဟနျနီ့ကို စိတျပူပေးတာ ကြေးဇူးတငျပါတယျ”
“ရပါတယျ မမေ… ဒါဆိုကြှနျတျောသှားဦးမယျ”
ဇှဲသဈပွနျသှားတော့ ဧက က..
“ဟုတျတယျ ကို ဟနျနီပွနကေဆြရာဝနျပါ”
“သွျော… အငျးပါ ကဲ ဟနျနီ ကိုယျပွနျတော့မယျ.. ဟနျနီလညျး ပွနျနားလိုကျတော့… ယမုံ ကြှနျတျောထပျပွီးတော့ ကြေးဇူးတငျပါတယျနျော”
ဧက ကဟနျနီတို့ကိုနှုတျဆကျပွီး ပွနျသှားသညျ။ ဟနျနီ့ကိုတော့ ယမုံကိုယျတိုငျ ကားဖွငျ့ပွနျလိုကျပို့ပေးသညျ။ ယမုံ လိုကျပို့ပေးသောကွောငျ့ မာမီကလညျး ဟနျနီအိမျပွနျနောကျကမြှုကို သံသယမဝငျတော့။ ဟနျနီခွလေကျဆေး အိပျယာဝငျရနျ ပွငျလိုကျပွီး အိပျယာပျေါလှဲခလြိုကျစဉျ ဧကဆီမှ “I love you more than yesterday” ဆိုသော message လေးဝငျလာသညျ။ ဟနျနီကလညျး me too လို့ reply ပွနျလိုကျပွီး အိပျစကျရနျ မကျြလုံးမြားမှိတျလိုကျစဉျ ဧက၏ ကလေးမြားနှငျ့ပြျောပါးနပေုံမြား နှေးထှေးကွငျနာတတျသောအပွုအမူမြားကို ပွနျမွငျယောငျမိကာ တဈယောကျတညျး ကွညျနူးစှာ ပွုံးလိုကျမိသညျ။
သို့သျော.. တဈဖကျမှ ဧက၏ အခွအေနကေိုသာ ဟနျနီသိခဲ့လြှငျ ထိုသို့ ပွုံးနိုငျပါဦးမညျလား?
Tagged Dark, fiction, Fun, love, peace, psychology, Side, violence
သီတင်းကျွတ် အခါသမယတွင်တွေ့ရတတ်သော လူ(၈)မျိုး
Posted on October 24, 2018 Author Christina Rosy
ခေတ်အဆက်ဆက် သရဲရုပ်ရှင်တွေ ရိုက်ကူးခံရတဲ့ အိမ်ကြီးတစ်လုံးအကြောင်း
Posted on July 13, 2018 July 25, 2018 Author Sugar Cane
ဒီလိုအိမ်ကြီးမှာ တစ်ညလောက်များ သွားနေရလို့ကတော့ အင်း…
မြင်လိုက်တာနဲ့ ကြည့်မရ၊ ရန်ဖြစ်ကြတာ ဘယ်ရာသီခွင်တွေ ဖြစ်မလဲ????
Posted on March 28, 2019 March 28, 2019 Author Phyu Thant
အကြည့်ချင်းဆုံရင်တောင် ကလိကလိနဲ့ ရန်ဖြစ်ချင်လာတာမျိုး..